NgoFebruwari 29 i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi NgoFebruwari 29 i-Zodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
NgoFebruwari 29 i-Zodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ngoFebruwari 29 ziiPisces.
Uphawu lweenkwenkwezi: Iintlanzi . Olu phawu lumele abo bazalwa ngoFebruwari 19-Matshi 20, xa iLanga lithutha uphawu lwePisces zodiac. Iphakamisa ukuguquguquka, ubuntununtunu, uvelwano nothando olungenamiqathango.
Inkqubo ye- IPisces Constellation Ngenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini ze-zodiac, egubungela ukubonakala okubonakalayo phakathi kuka-90 ° kunye ne--65 °. Ilele phakathi kwe-Aquarius ukuya eNtshona kunye nee-Aries eMpuma kwindawo engama-889 square degrees. Inkwenkwezi eqaqambileyo ibizwa ngokuba nguVan Maanen's.
Intlanzi ibizwa ngesiLatin njengePisces, ngesiSpanish njengePisci ngelixa isiFrentshi sayibiza ngokuba yiPoissons
Uphawu olwahlukileyo: iVirgo. Ekuvumiseni ngeenkwenkwezi, le miqondiso ibekwe malunga nesangqa se-zodiac okanye ivili kwaye kwimeko yePisces ibonakalisa ukufihla nokusebenza.
yintoni uphawu lwama-zodiac angama-24
Ukuziphatha: Imfono. Le modality ityhila imeko yokuthetha yabo bazalwa nge-29 kaFebruwari kunye nokuzula kwabo kunye nokunyaniseka ebomini ngokubanzi.
Indlu elawulayo: Indlu yeshumi elinesibini . Le ndlu imele ukugqitywa kunye nokuhlaziywa. Ukurisayikilisha kunye nokuguqula ubomi kwindawo enye emva kohlalutyo olunzulu. Ikwacebisa ukomelela kunye nohlaziyo oluvela kulwazi.
Umzimba olawulayo: INeptune . Olu nxibelelwano lubonisa ubungqongqo kunye nokubekwa esweni. Ikwabonisa ukwanda kubomi baba bantu. I-Neptune iyafana noPoseidon uthixo wolwandle wamaGrike.
Isiqalelo: Amanzi . Le yeyona nto ityhila imfihlelo kunye nobunzima obufihlwe kubomi babo bazalwa ngoFebruwari 29. Amanzi kuthiwa axubene ngokwahlukileyo nezinye izinto, umzekelo, ngomhlaba uyanceda ekubumbeni izinto.
Usuku lwethamsanqa: uLwesine . Olu suku luphantsi kolawulo lweJupiter kwaye luphawu lokuqonda kunye nesibindi. Ikwachonga imeko yokuqonda yabantu basePisces.
Amanani anethamsanqa: 5, 6, 14, 18, 22.
Ulwazi oluthe kratya ngoFebruwari 29 Zodiac ngezantsi ▼
IVirgo Man kunye neTaurus Woman ixesha elide ukuhambelana
Umhlaza welanga i-Aquarius inyanga: Ubuntu obuThambekayo
indlela yokutsala abafazi be-libra
Umhlaza womfazi sagittarius ukuhambelana kwendoda
venus kwindlu ye-10 yendalo
yintoni ejika kwindoda eyi-aries